Sergio Ramos Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts
musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Spanish Vatambi Vatambi Sergio Ramos Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhola Genius inonyatsozivikanwa neNickname; "Cuqui". Our Sergio Ramos Childhood Nyaya pamwe Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvehutano hwake asi vashomanana vanofunga Sergio Ramos Biography iyo inofadza chaizvo. Iye zvino kunze kwekuwedzera kwaunoda, rega Tanga.
Sergio Ramos Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Sergio Ramos García akaberekwa musi we 30th waMarch 1986 muCamas, Seville, Spain nevabereki; Paqui Ramos (amai) naJose María Ramos (baba).
Akakurira nevana vemunin'ina vaviri Rene naMiriam.Ramos anokwira bhora panguva ye14 semudziviriri.
Kubva kubva mumazuva ake ehuduku, Ramos aive neunhu hunovhiringidza uye hwakanaka hunotaridzika.
Sezvo mwana akakurira mune nzombe yekurwa muguta reSeville, Sergio akafarira kuva mhondi uye haana kumbodzidzisa nezvebhora. Aigona kuona nzombe ichirwa zuva rose.
Sergio Ramos rudo rweBull Fighting
Nemhaka yekutaridzirwa semitambo ine ngozi, vabereki vake vakamutsamwisa pakuitora sechisarudzo chebasa. Yaiva mukoma wake mukuru uyo ​​akaita shanduro huru pane iyo inotarisira Sergio Ramos isu tinoziva nhasi.
Mumashoko ake, "Pandaiva muduku, ndaimbova nebasa rokurota. Ndaigara ndichida kuva yenzombe asi amai vangu vaitya zvishoma kuti ndive nzombe. Mushure mekurudzirwa nehanzvadzi yangu yakakura Rene, ndakasarudza yebhola raive risina ngozi. "
Sergio Ramos Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -Career in Summary
Mukoma wake mukuru Rene (anoshanda iye zvino seanomugove wake) akakurudzira Sergio kuti aedze kutamba. Vabereki vake vakaronga mudzidzisi wega wega uyo akamubatsira kuwana tarenda yakavanzika mumutambo.
Sergio Ramos pachake kudzidziswa
Ramos mushure mekuwana tarenda mumutambo webhola yekubatana nekambani yake yekutanga, FC Camas. Akakunda zvikuru pakambani yake yevechidiki kukunda mitezo yakawanda yemakwikwi uye kuenda kune varume vakawanda vemakwikwi ekubatanidza.
PaC FC Camas, zvakazoitika kuti Sergio muduku akanga ane tarenda guru rebhora maari. Izvi zvakaita kuti Sevilla amubate.
Sergio Ramos akazarura basa rake kubva kuSvilla FC. Izvi zvakagamuchirwa nezvose paFIFA Ballon d'Or Gala. Ikoko akaratidza mikana yakawanda uye 2003 akazopedzisira ashevedzwa kusvika kune vashandi vokutanga. Sergio akaramba achirwisana, achizvichengetedza nekubudirira kwakanaka, nzvimbo munzvimbo yekutanga kutarisana semudziviriri akanaka.
Mamwe mapoka eEurope akanga achitevera kufambira mberi kwake nekucherechedza zvikuru wake Sevilla mazuva ake. Nemhaka yekubudirira kwake kwakanakisisa, Sergio akawana zvipo zvizhinji. Yaiva yeSpain gamba guru guru Real Madrid rakazopedzisira ramukurira. Vamwe vose, sezvavanotaura, iye zvino nhau.
Sergio Ramos Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
BABA: Jose María Ramos (baba vaSergio) vanoita basa guru mubato reSergio. Akabetsera mukukurukurirana kwakasimba ne Real Madrid iyo yakaunza kugadziriswa mubvumirano yemadridista yemudziviriri. Akanga ari mutungamiri we 27 mamiriyoni emadhora ayo akatumira ku Real Madrid mu 2005. Yaiva mari yekutumira mari kune mwanakomana wake wechidiki.
Sergio Ramos baba, Jose María Ramos vakaona mwanakomana wavo achishandisa Real Madrid
Jose Ramos anoramba ari munharaunda yomwanakomana wake pedyo kubva pamazuva ake achiri muduku.
Sergio Ramos haazovi nemakakatanwa kubva kumhuri yake kana akasarudza kusiya Real Madrid kune Old Trafford nguva ipi zvayo mubasa rake - nokuti baba vake ndivo vashandi veManchester United. Pamberi pemusangano weBlanc League pakati pemativi maviri mu2013, Ramos akaratidza rudo rwababa vake rweChirungu.
Akaudza Sunday Times kuti: 'Baba vangu vaishanda kutarisa bhora guru uye vaizoti kwandiri pandakanga ndiri mwana: Saka uye zviri kutamba nhasi muUnited. Mwanakomana, iwe unofanira kutarisa Eric Cantona uye David Beckham".
AMAI:Vanoti amai vanogara vakarurama, saka maManchester United mafesheni akambogadzirisa mashoko mushure mekunge Sergio Ramos 'mum akati mwana wake aizoramba ari ku Real Madrid.
Amai vaSergio, Paqui Ramos mufananidzo we Real Real kusvika kune imwe. Iye, pamwe nemudzimai waSergio vanoshanda zvakanyanya muSergio kuramba achigara ku Real Madrid kunyange zvazvo vhidhiyo vachiri kuramba vachiratidza kusagutsikana kwaRamos kuBernabeu mushure mekusagadzikana kwemukuru weGeneral Florentino Perez kupa chivimbiso chake chokumupa mupiro wechibvumirano chitsva uye chavandudzwa mu2015.
Ukama hwakakura huriko pakati peSergio naPaqui.
Sergio (mwanakomana) uye Pacqi's (amai) Rudo
Hanzvadzi konama: Rene Ramos ndiye mukoma mukuru waSergio. Iye zvino ari mugovereri wake anoita basa rake. Mazuva ano, anowedzera basa raSergio kupfuura Jose, baba vake vaimboita basa guru.
Sergio Ramos hama- Rene Ramos
Sezvambotaurwa kare, Rene wakanga uropi huri shure kwekuita kwaSergio mumutambo.
Hanzvadzi sikana: Miriam Ramos ndiye muduku uye hanzvadzi chete kuna Sergio Ramos. Akashanda mumuchato wehama yake kuna Pilar Rubio. Miriami akaita sehupombwe wake.
Sergio Ramos hanzvadzi. Mariam sevanasikana, musikana
Sergio Ramos Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Ramos akapinda muukama nemunyori wenhau / muparidzi Pilar Rubio munaSeptember 2012, uye izvi zvakasimbiswa nezvose pa FIFA Ballon d'Or Gala. Pilar Rubio ane mukurumbira weTerevhiya unhu, mutevedzeri uye muenzaniso. Anozivikanwa nekuvhara zviitiko zveterevhizheni network La Sexta. Akanyatsotarisa mumagazini akawanda evarume uye akaonekwa mumafirimu akafanana Isi & Disi, alto voltaje, Carlitos yeros de los suenos, Custion de quimica uye akawanda akawanda. Muna 2008 uye 2009 akasarudzwa sevakadzi vekupedzisira munyika yose neSpanishi edition reFMM magazine.
Sergio Ramos naPilar Rubio vakaroorwa muna 2012 mushure mekunge vane hukama hwepedyo.
Vane vanakomana vaviri: Sergio (akaberekwa May 6, 2014) uye Marco (akaberekwa November 14, 2015).
Nguva yemhuri yekupembera trophies inonzi ndiyo yakakwirira yeRamos nemhuri yake.
Asati agarisana naPilar Rubio, Sergio Ramos ave achiine humwe hutungamiri uye mutambi wemifananidzo. Vanosanganisira; Elizabeth Reyes (2006- 2007), Carolina Martinez (2006), Nereida Gllardo (2007), Amaia Salamanca (2009) naLara Alvarez (2010- 2012)
Sergio Ramos Relationship History- The Untold Story
Sergio Ramos hukama hwehukama hunofanana hwakafanana nehwo Karim Benzema uye Gonzalo Higuain avo vakanyatsotsvaga vasikana vasati varega. Yaro yakasiyana chaizvo neyeyo Harry Kane, David Silva uye Pedro Rodriguez.
Sergio Ramos Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -Rudo rweGitare
Mubvunzurudzo pamwe FourFourTwo, akabvuma kuti ndiye ane rudo mumhuri - kana achienzaniswa nehama dzake uye mhuri yakakura.
Paakabvunzwa nezvazvo, akati, "Ndinozviona somunhu anonyanya kufarira mhuri yangu. Ndakagara ndichiona zvakaoma kuritsanangurira kune imwe nyika; Ndinoshandisa Guitar kuita izvo "
Sei Sergio Ramos anoratidza rudo
Sergio Ramos Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -Bull Fighting
Ramos mutsigiri wenzombe, iyo inozivikanwa mumusha wekwake, uye iye shamwari yega ye matador Alejandro Talavante. Akapemberera kukunda kwechikwata neye nyika kuburikidza necape matador's.
Sergio Ramos achiri kufungidzira nzombe
Ramos anovewo ane hanya yefarasi aficionado. Ane pfuma yepuri muAtalusia yekuzvarwa kwake yakatsaurirwa kuberekwa kwebhiza yeAndalusian.
Sergio Ramos Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -A Katurike
Ramos is Katurike, uye ane tattoo Mary iyo inoputira hafu yepamusoro yesimba rake rworuboshwe.
Sergio Ramos kutenda mune tattoo
Sergio Ramos Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -Tattoo Facts
Sergio anozivikanwa zvikuru nokuda kwehutano hwake hwemuviri. Ane nhamba yekufananidzira ye inks mumuviri wake.
Sergio Ramos Muviri Wehu Tattoo Facts
Anobata zvinyorwa zvinoreva kumashure kwemavara ose. Aya nhamba ari pedyo nemwoyo wake. Ramos akapfekedza no.32 uye no.35 shirts paSevilla, vasati vasvika ku Real Madrid uye vachiita zvekutanga kuSpain ane makore 19. Izvi ndizvo zvinoreva nhamba dziri muruoko rwake.
Sergio Ramos Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -Sarudzo yeMotokari
Sergio Ramos anoyevedza nemagetsi eGermany anogadzira Audi kuti ape motokari dzake.
Sergio Ramos chisarudzo chemotokari
Sergio Ramos Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -Simba uye Utera
Ramos mutambi ane simba mumuviri, nekuda kwekukwirira kwake uye kutungamirira kunyatso, achimuita chinangwa chekutengesa pazvigadziro-zvidimbu.
Sergio Ramos; Murume ane simba guru
Ramos iyewo ane unyanzvi, ane utsinye tackler. Ane chipo chekufamba, unyanzvi hunyanzvi hwokugadzira, uyewo kugovera kwakanaka uye kuyambuka kukwanisa.
Maererano nepepanhau reSpain yemitambo Marca, FIFA zvinyorwa zvepamutemo zvakasimbisa kuti mu 2015, Ramos akavharidzirwa pamhepo inotenderera ye30.6 makiromita neawa, achimuita iye wevamwe vatambi vatsva munyika yose panguva iyoyo.
Utera hwake hunoramba huri kurangwa.
Avo Vasina kusimba Kurutivi rwaSergio Ramos
Akatumirwa kunze kwe22 nguva kubva pakatanga basa rake ku Real Madrid. Iyi ndiyo nhamba yepamusoro yekadhi rakatsvaga munhoroondo yechikwata. Uyezve, iyo yaLaiga isingadikanwi rekodi ye Real Real. Sergio Ramos ane makadhi matsvuku mumugariro weLa Liga. Rudo rwake rwemakadhi matsvuku harwusingaperi.
Kruse May 27, 2018 Pa 4: 27 pm
Kana Mr. Ramos achiziva kuti chii chiri ....
Anofanirwa kunzwa akaipa pamusoro pake nhasi.
Zviri pachena kuti mukomana uyu ane imwe nhau semutambi ane utsinye,
Ini ndingadai ndisingazvirumbidzi kana muZidane zvishongo ... zviri pachena Ramos aiva nebasa rokuparadza mutambi uye Zidane anofanira kuyeuka zvaasingazvidi iye semutambi, akanyevera kuburikidza neRamos action nezuro.
Vamwe vanhu vanofamba zvishoma nezvishoma; Ramos ndomumwe wavo uye anofanira kunge akaunganidza 38th kadi yake semakwikwi esangano rekuita maitiro akaipa.